» Human Rights Watch: Dowladu waa in ay siideysaa saxafiga ay heystaan iyo labo Haweyn oo mid kamida ah la kufasaday
Human Rights Watch: Dowladu waa in ay siideysaa saxafiga ay heystaan iyo labo Haweyn oo mid kamida ah la kufasaday
January 13, 2013 - Written by Muqdisho - Edited byMuqdisho Share(Nairobi) – Mas’uuliyiinta Soomaaliya waa in ay sii dayaan saxafi iyo labo qof oo kale oo lala xiriirinayo haweyney sheegtay in ay kufsadeen ciidamada dowladda Soomaaliya.
Booliska Magaalada Muqdisho ayaa xiray Wariye Abdiaziz Abdinur Ibrahim isagoo aan wax dacwad ah lagu soo oogin, waxana uu xiranyahay tan iyo 10kii bishan January ee 2013ka.
“Booliska Soomaaliya waxa ay xireen saxafi iyo haweyney la kufsaday, halka dadkii falka kufsiga lagu soo eedeeyay ay xuryihiin,” sidaasi waxaa sheegay Daniel Bekele oo ah Agaasimaha Human Rights Watch ee Africa. “Dowladda cusub ee Soomaaliya waxa ay u baahantahay in ay hubiso in boolisku uu qeyb ka yahay xalka xadgudubyada ay geysanayaan Ciidamada Amaanka, qeyb kama ahan dhibaatada.”
Bishan January 10-dii Waaxda danbi baarita booliska Soomaaliyeed ee (CID) oo Muqdisho ku taalla ayaa xirtay haweyney sheegtay in ay kufsadeen ciidamada dowladda bilo ka hor iyadoo gabarkale lala soo xiriiriyay oo ay saxaafada warka arrinkaa ku aadan siiyay.
Human Rights Watch ayaa sheegtay in aysan awood u laheyn in ay baarto kufsiga la sheegay in loogeystay haweyneydaasi.
Intii lagu gudajiray baaritaanka howshan ayaa hogaamiyaha CID Janaraal Cabdulaahi Xasan Bariise ayaa waxa uu si xoog ah u weydiistay kagana qaatay Nabarka saxafiyiintii wareystay.
Booliska oo adeegsanaya talfoonka haweynayda la kufsaday ayaa wacay Cabdi Casiis Cabdi Nuur Ibraahim oo u shaqeynayay Dalsan Radio iyo Badri Media Productions kaasi oo dhawaan wareystay dhibanaha, waxana ay u sheegeen in uu xafiiska CID-da yimaado, waxana su’aalo kaddib la sheegay in laxiray.
Haweyneyda dhibanaha aheyd ayaa la sii dayay 11 January markii ninkeeda uu yimid goobtii ay ku xirneyd waxana boolisku ay go’aansadeen in ay isag ku badlaan sida laga soo xigtay ilo lagu kal soonaan karo. Waxaa sidoo kale jira in haweynekale oo arintaan xiriir la leh ay xirantahay.
Arrintan ayaa u muuqatay mid xiriir la leh Maqaal lagu daabacay Al Jazeera bishan 6-deedii taasi oo muuujineysay in barakacayaasha ku dhaqan Muqdisho ay la kulmaan kufsiga ugu faraha badan.
Sida laga soo xigtay saxafiyiin deegaanka ah CID-da ayaa u heysata Koronto in uu wax ka soo saaray maqaalka lagu daabacay Al Jazeera, inkastoo Cabdi Casiis uu san u sahqeyn Al Jazeera hadan labo maalin kaddib maqaalka markii uu soobaxay ayuu wareystay haweyneda dhibanaha ah.
CID ayaa sidoo kale su’aalo waydiiyay dhawr saxafi oo ay ku jiraan Wariyaha qeybta carabiga Al Jazeera Cumar Faaruuq iyo Cabdi Casiis Maxamed Diiriye oo ah saxafi ka shaqeeya Idaacad kaasi oo hal habeen u xirnaa hay’adda Nabad Sugida Qaranka .
“Ka aamusida dhibanayaasha la kufsaday iyo saxafiyiin madhameyn doont xadgudubyada galmoodka, laakiin waxa ay sii xoojineysaa xalada murugsan ee hada taagan” sidaasi waxaa Yiri Bekele. “Madaxweyne Xasan Sheekh waxaa in uu ka rumeeyaa balanqaadkiisii waaxana uu hubiyaa qaabka ay booliska u xalinayaa kiiskana aan saxafiyiinta ku dhiirigalineyn in ay wariyaan xadgudub yada ay geestaan dowladda ama dadka raadinaya inay cadaalad helaan.”
3 Responses to Human Rights Watch: Dowladu waa in ay siideysaa saxafiga ay heystaan iyo labo Haweyn oo mid kamida ah la kufasaday
hassan shek mohamud says:	January 13, 2013 at 08:03	Warqad faqda ban nalaga kor tag cidi kuso xad gudubto dowlada iyo police ka ba wa an ciqabeyna mida uma dul qadaneuno wayo war yaya shinan eya aya tihin umada ayad isku dirta wax yar an wax micna ah laheyn ayad bun bunisa qasatan warqad adinka wan idin naqana wax yabaha ad tawisan malin walbo lkn malin ayad kashala yeysan hadeynan is dabar qan o eynan jojin wararka qal dan e ad laso or deysan wayo dad badan aya isku layo hadalada ad shegeysan iyo gaba ilada ad isku direysa waxaso dhan wan lasocona e ogada hadaba stupid fucking warqad
Reply	ogaden cagdher wase says:	January 13, 2013 at 08:11	Kkk War waxeda han jawad wey dhafene maxey raban sidan o dhan ugu han jabayan dowlada
Reply	Xayle says:	January 14, 2013 at 01:01	War qad adpad u mahadsanthn wayo wariyasha waxey u shaqeyan bulshada waxey ka dhexshaqeya bulshada dhibatada bulshada haka sexanina xirig dil jirdil u dhawar adega so jediya runta ale aya garabkina tagan warqad jir o jog